Posted by ကို Tranquillus | 10 ပင်လယ်, 2018 | နိုင်ငံခြားဘာသာစကား
အနှစ်ချုပ်: ဂျာမန်သင်ယူဖို့အဆိုပါ meillleurs အရင်းအမြစ်လမ်းညွှန်။
သငျသညျ (စသည်တို့ကိုစာဖတ်ခြင်း, စာရေးခြင်း, ဝေါဟာရ, စာပိုဒ်များ, သဒ္ဒါ,) ဘာသာစကားကိုအပေါငျးတို့သရှုထောင့်ကိုနားလည်ကူညီမတူညီကြခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆိုဒ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
ဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူကြှမျးကငျြစှာဘာသာစကားနားလည်သဘောပေါက်
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက် applications များမှတစ်ဆင့် moveable Learn
ဒါကြောင့်အီးယူထဲမှာအများဆုံးကျယ်ပြန့်ပြောပြီဘာသာစကားအောင်, ဥရောပမှာရှိတဲ့နီးပါး 100 သန်းစပီကာဖြင့်မိန့်တော်တစ်ဦးကဘာသာစကား။ ထိုသို့သောဂျာမနီ, သြစတြီးယား, လီချင်စတိန်း, ဆွစ်ဇာလန်, လူဇင်ဘတ်, ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်တောင် Tyrol ၏အီတလီဒေသအဖြစ်နိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံမှ၏ရုံးသုံးဘာသာစကားသည်။ ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်ခြင်းမရှိပဲတစ်ဒါဇင်နိုင်ငံများတွင်ပြောပြီခံရအပြင်။
အမှန်စင်စစ်ဂျာမဏီအဓိကကမ္ဘာ့အင်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အ view ၏နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအချက်အတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤဘာသာစကားကိုပြောဆိုခြင်းကအများအပြားဥရောပနိုင်ငံများတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပေးနေချိန်မှာအကြီးအယဉ်ကျေးမှုမတူကွဲပြားမှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့သခင်ဂျာမန်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ္ဘာကြီးအတွက်အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့များစွာကိုနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများက၎င်း၏ဂျာမန်စကားပြောနိုင်ငံများတွင်၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်ရှိကွောငျးသိရအထူးသဖြင့်အခါ, သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်တံခါးများဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်အထက်တန်းကျောင်း, ဂျာမန်ဘာသာစကားပြီးသားဒုတိယဘာသာစကားကျောင်းမှာအဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။ Alsace နှင့် Moselle ဂြာမနျတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းဆွေးနွေးရန်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အနေဖြင့်ထိုအအားသာချက်များအပြင်, ကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်!
ဂျာမန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်တူသောပြင်သစ်နှင့်အမျှတစ်ဦးလက်တင်ဘာသာစကားမပြောတတ်လေ့ရှိပါသည်အထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးဘာသာစကားသင်ယူကြသည်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအနည်းဆုံးသည်မဟုတ်, အနာဂတျမှာအလွန်အကျိုးရှိကြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အတူတူသင် Goethe များ၏မြေယာ၏ဘာသာစကားကိုသင်ယူကူညီရန်အရင်းအမြစ်များနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူအလှဆင်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
သင်သည်သင်၏ပြည့်စုံဆောင်းပါးနှင့်ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်အတွက်အတူတကွဂျာမန်သင်ယူဖို့ကို web ပေါ်မှာရှိသမျှလိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အားလုံးကိုက်ညီမှတစ်ဦးမတူညီရွေးချယ်မှု: အစပြုသူ, အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်!
မှပေးဆောင်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှတဆင့် Going: အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များ, မိုဘိုင်း apps များ, ဗီဒီယိုများ, podcasts တွေကို, အထူးပြုက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်လွတ်လပ်စွာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစတင်အပေါငျးတို့သ turnkey ရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဘာသာစကား (စာဖတ်ခြင်း, စာရေးခြင်းများအားလုံးရှုထောင့်ကိုနားလည်ကူညီမတူညီကြခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောဆိုဒ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ,
ဝေါဟာရ, စာပိုဒ်များ, သဒ္ဒါ, etc)
ဘလော့ဂ်များ, အထူးပြုနှင့်သမဝါယမက်ဘ်ဆိုက်များ, မဂ္ဂဇင်း, အဘိဓါနျ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: ငါတို့သည်သင်တို့ formats အမျိုးမျိုးနဲ့သင်ယူခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရောက်စေဖို့ရွေးချယ်ဖို့လုပ်ကျွေးကြ၏။ သူတို့ကို Explore နှင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့သင်ယူ: conjugation, ဝေါဟာရ, သဒ္ဒါ, ဖတ်ရှုခြင်း။ ဤအရင်းအမြစ်များကိုသင်လျင်မြန်စွာယုံကြည်မှုနှင့်အတူပညာရှင်ပီသစွာဂျာမန်အဆင့်မြင့်ပြောဆိုတတ်ရန်သင်ယူကူညီပေးပါမည်။
ဘီဘီစီရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အများအပြားကိုအခမဲ့အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရှိပြီးအမြဲတမ်းအရည်အသွေးမြင့်ပညာရေး၏။ လူတိုင်းအတွက်, အရင်ကဆိုရင်နှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်ဆင့်အဘို့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်, သဒ္ဒါ, ဝေါဟာရ, အသုံးအနှုန်းတွေ, ထိုကဲ့သို့သောရေဒီယိုအဖြစ်မီဒီယာ, တီဗီ, ရုပ်ရှင်များ, မဂ္ဂဇင်း။ ဘာသာစကားသင်ယူမှု၏လယ်ပြင်တွင်လေးနက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏လက်တွေ့, ပြည့်စုံ, ဘီဘီစီကသူ၏လမ်းကြောင်းကို။
Deutsche ကောင်းစွာ :
Deutsche ကောင်းစွာအခမဲ့သင်တန်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကို module တွေတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ကမ်းလှမ်းရာဂျာမဏီ၏နိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးကအာရုံစိုက်။
သင့်အဆင့်, အစပြုသူသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတွေ့အကြုံရှိရွေးကောက်သဖြင့်, သင်လိုချင်သောသင်တန်းအမျိုးအစား: လေ့ကျင့်ရေး, ဗီဒီယိုများ, podcasts တွေကို, ဒါမှမဟုတ် print ထုတ်မှသင်ထောက်ကူ။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောပလက်ဖောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အဆင့်အထိခိုင်မာအောင်ရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်။
အလွန်ထူးခွားတဲ့ရဲပြပွဲ (A1 အဆင့်) နှင့်အတူဂျာမန်လေ့လာပါ။
ရေဒီယို: D :
ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့၏ပါးစပ် comprehension (အဆင့်ဆင့် A1 / A2) အတွက်လေ့ကျင့်ကိုကူညီအများအပြားဖြစ်စဉ်များအတွက်အသံသင်တန်း။
လေ့ကျင့်ခန်း, စမ်းသပ်မှုများနှင့်သင်ထောက်ကူနှင့်အတူ 30 သင်ခန်းစာများ: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသင်ယူမှုသည်။ ဤသင်တန်းများအတွက်အချို့အသိပညာရှိသည်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ (A1 Levels A2, B1) ။
Andreas ၏ Adventures ကိုတစ်ဦးသတင်းစာပညာကျောင်းသား။ Play, ဒီသင်တန်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လေ့ကျင့်ခန်း, ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ Audio Clip နှင့်အတူ 26 သင်ခန်းစာများလေးအစုံရှိပါတယ်။ ဒါဟာအခုမှစများနှင့်အဆင့်မြင့်သင်ယူသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ (A1 Levels A2, B1) ။
ဂျာမနီ, သြစတြီးယားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအခြေစိုက်အသံဖိုင်ထဲမှာနေ့စဉ်မြင်ကွင်းများ၏တစ်ဦးကအလွန်မတူညီစုဆောင်းခြင်း။ ဂျာမန်၏အသက်တာ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုမျှ!
ဒါဟာအဆင့်မြင့်သင်ယူသူ (အဆငျ့ B1) အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Deutsch lernen MIT Jojo :
Cologne အတွက်ရောက်ရှိလာသောလူငယ်တစ်ဦးဘရာဇီး၏ Adventures Chronicles သောစီးရီး။ အဆိုပါ 33 ဖြစ်စဉ်များ (B1 အဆင့်ဆင့် B2) တွင်အောက်ပါတို့ကဘယ်လိုလေ့လာပါ။
သငျသညျတိကျသောစကားလုံးများ, lexical လယ်ကွင်းများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကိုရည်မှတ် idiomatic အသုံးအနှုန်းတွေ, ကုန်သွယ်ရေး, စျေးကွက်ကိုသင်ယူမည့်မှတဆင့်စီးပွားရေးဂျာမန်သင်တန်းများ။
နောက်ကိုလိုက်ရန်သူပြီးသားကောင်းသောအောက်ခြေအဆင့် B2 ရှိရမည်။
ဤ site စကားအသုံးအနှုံးစာအုပျတစျမြိုးနှိုင်းယှဉ်နိုင်!
၎င်းသည်သင့်အားနေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မရှိမဖြစ်အသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုလေ့လာရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ ခေါင်းစဉ်အလိုက်နှင့် "hello" ကဲ့သို့အခြေခံအကျဆုံးမှ "ဒီညသွားချင်ပါသလား" စသည့်စကားစုသို့ခွဲခြားသည်။ », သင်အခြေခံလိမ့်မည်! သင်၏ဂျာမန်စကားပြောနေစဉ်ကာလအတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အပိုအနည်းငယ် - download လုပ်ရန် PDF နှင့် MP3 ဖိုင်များ (အခကြေးငွေပေးရန်) ။
တကမ္ဘာလုံးတက်ကြွဂျာမဏီ၏ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဌာန။ မတူညီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၏အဆင့်ဆင့်, စာရွက်စာတမ်းများ, ဗီဒီယိုများ, ကြောင်တစ်ကောင်နှင့်အခြားသင်ယူသူနှင့်အတူဂျာမန်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ဖိုရမ်တစ်ခု: အဆိုပါပလက်ဖောင်းဂျာမန်သင်ယူခြင်းအတွက်လူငယ်အထောက်အကူပြုဖို့အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဒါဟာအစစာမေးပွဲများ ယူ. ဂျာမနီမှာ intercultural ပညာရေးဖလှယ်သွားရန်ကူညီပေးသည်။
ဖတ်ရန် တရုတ်အသုံးဝင်သည်ကိုလေ့လာပါ။ အထူးကောင်းမွန်ပြီးအခမဲ့နည်းလမ်း
အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ၄ သန်းရှိသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသည်၎င်း၏ပြည့်စုံပြီးပျော်စရာသင်တန်းများအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ အသုံးပြုသူများ ဖန်တီး၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးသူမှအတည်ပြုပြီးဖြစ်သောစစ်မှန်သောအခမဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (စမ်းသပ်မှု၊ သဒ္ဒါ၊ စာလုံးပေါင်း၊ ဝေါဟာရ၊ အသံ) များစွာကိုပေးထားသည်။ ဆွေးနွေးမှုအတွက်ဖိုရမ်အပါအ ၀ င်အခြားကိရိယာများနှင့်သင်မေးသောမေးခွန်းများအတွက်အဖြေအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ပျော်စရာကောင်းနေစဉ်နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုတိုးတက်စေရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခု။
အသံထွက်သင်ခန်းစာများ, ဝါစင်္ကများ, ဝေါဟာရ, verb ကြိယာ, ဝါကျဆောက်လုပ်ရေး ... အလွန်ကောင်းသောသင်တန်းနှင့်သတ္တုတွင်းသတင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်အွန်လိုင်းသင်ယူဖို့တစ်ဦးကပြည့်စုံ site ကို။ အပြန်အလှန်အွန်လိုင်းသင်တန်းများအတွက်တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုအပိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွန်ကောင်းစွာကကူညီပြုနေတဲ့ယူကျု့ချန်နယ်ရှိပါတယ်။
Deutsch အင်ဖို :
တစ်ဦးကပလက်ဖောင်း31 ကဘာသာစကား, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများကသင်ယူခြင်းအပေါ်အလေးပေးလို့ပဲ။ အမှန်စင်စစ်သင်တို့ရှိသမျှသည်အဆင့်ဆင့်, သင်ခန်းစာများကို, သဒ္ဒါ, အသံများနှင့်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူသင်တန်းများ, သင်တို့ကဲ့သို့သင်ယူသူတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့ဘာသာပေါင်းစုံဖိုရမ်နှင့်အဘိဓါန်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤ site ထိုမှတပါးလည်းဂျာမနီနဲ့သြစတြီးယားတွင်နေထိုင်သောနှင့်အလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုလက်တွေ့ကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်း, ခေတ်မီခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောနည်းလမ်းပေးထားပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်အရှိဆုံးပြည့်စုံက်ဘ်ဆိုက်များများထဲမှ!
ဂျာမန်နှင့်ပြီးသားကျွမ်းကျင်ကြသောသူတို့အဘို့၌ရေးထားလျက်ရှိ၏တစ်ဦးက site ကို။ ဒီ site ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုနာမတျောကိုစာလုံးပေါင်း၌သင်တို့၏အသိပညာပိုမိုနက်ရှိုင်းအကြံပြုအဖြစ်သင်ကူညီကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုမျှနေတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားစကားပြောအတွက်အောင်မြင်ဖို့ဝေါဟာရတိုးမြှင့်ထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။ ဤ site အများအပြားဂျာမန်ဝေါဟာရ image ကိုသင်ယူဖို့ပြီးပြည့်စုံလေ့ကျင့်ရေးပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျ, အတော်ကြာအဆင့်ဆင့် (V1 V2 V3) အကြားရဆုံးကိုရှေးခယျြနိုငျလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာသင်လုပ်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ရမှတ်တွေ့မြင်နိုင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
30 နှစျကျြောဘာသာစကားမှာအထူးပြုတစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းက။ conjugation, ဝေါဟာရနှင့်သဒ္ဒါအတွက်လေ့ကျင့်ပေးရန်လက်တွေ့ကျတဲ့လမ်းညွှန်, အွန်လိုင်းစာမေးပွဲများ, ဘာသာစကားအပေါ်အကွံဉာဏျ: ဒါဟာတစ်ဂျာမန်သင်ယူဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါမဂ္ဂဇင်း, ဆောင်းပါးများအပြင်, ဝေါဟာရကတ်များနှင့်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းပါရှိသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသငျသညျဂျာမန်နားလည်နှင့်သင့်အသံထွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်ဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်စက္ကူဗူးအဖြစ်အထုပ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာတွေ့လိမ့်မည်။ အထဲတွင်အဆိုပြုထားအဆိုပါဖော်မြူလာအလုံးစုံတို့အဘို့ပေးဆောင်နေကြတယ်, သင်ရုံအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ဧရိယာထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်သင့်အထုပ်အမိန့်ရှိသည်။
နည်းပြ၏, ကြီးစွာသောလိုအပ်နေအထူးသဖြင့်အသစ်တခုဘာသာစကားသင်ယူခြင်းအတွက်တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ပေါင်းစပ်! ဒါဟာ conjugation စားပွဲတင်ဆက်နှင့်သင်သတင်းအချက်အလက် (ဘာသာပြန်ချက် synonym တွေဟာ, ဥပမာ, etc) ရယူနေစဉ် 10 000 ဂျာမန်ကျော်ကြိယာ conjugating လေ့ကျင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကြှမျးကငျြစှာကျေးဇူးတင်စကားဘာသာစကားကိုနားလည်သဘောပေါက် à ဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး
Web ပေါ်ရှိရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုရှာပါ။ သူတို့ကပြင်သစ်သည်ငါတို့အဘို့အစဉ်အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်သည့်ဂျာမန်ကဲ့သို့သောဘာသာစကား, သင်ယူဖို့အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပျော်စရာများနှင့်အပြန်အလှန်လမ်းအတွက်သင်ယူမှုများကဲ့သို့ဘာမျှမကဤကိစ္စများတွင်ဒါ။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အချိန်မရွေးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
မာစတာ - စကားလုံးများ: ဗီဒီယိုများ, podcasts တွေကိုနှင့် YouTube channel များကိုဂြာမနျတွင်သင်သည်လေ့ကျင့်ပေးဖို့။
လျော့ပြေနှင့်အတူကွဲပြားခြားနား Learn နှင့်ဖြေလျှော့!
တစ်ဦးကအစွန်းရောက် series နှင့်ဂျာမန်သင်ယူဖို့? မဆိုးဂျာမန်စီးရီးခံစားနေချိန်မှာသင်ကအခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်ခံ့စေကူညီရန်စုံလင်သော။ ဧည့်သည်များ podcasts တွေကိုစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်အပေါငျးတို့သဖြစ်စဉ်များနှင့်ဗီဒီယိုများကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
နောက်ကျော 2003 2007 ဖို့ခြိနျးတှေ့ယဉ်ကျေးမှုဗီဒီယိုများအပေါ်အခြေခံပြီး Goethe-Institute မှ, ဖန်ဆင်းတစ်ဦးကပလက်ဖောင်း။
ဂျာမနီရှိလူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သောတိုတို (မိနစ် ၁၅ မိနစ်ခန့်) ဗီဒီယိုလေးဆယ်ကျော်။ ဤဗီဒီယိုများသည်အကြောင်းအရာနှင့်အခြေအနေကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်သင့်အားအထောက်အကူပြုသည့်စာသားဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
Deutsch Lernen အွန်လိုင်း :
တစ်ဦးကအလွန်ကောင်းယူကျု့ချန်နယ်စသည်တို့ကိုဝေါဟာရ, သဒ္ဒါ, ပတျသကျအများအပြားဗွီဒီယိုများ (နှစ်ဆယ်သင်ခန်းစာများ) အလှဆင် အဆိုပါဗီဒီယိုများကောင်းမွန်စွာပြုကြနှင့်သင့်သင်ယူခြင်းဂြာမနျတွင်သင်သည်ကောင်းသောပါစေလျက်ရှိသည်။
တဦးတည်းအပေါငျးတို့သသင်ခန်းစာများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဘယ်မှာ website တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါယူကျု့ချန်နယ် Sonja Hubmann :
ဤသည်အလွန်ဖော်ရွေတတ်တဲ့ဗီဒီယိုများအတွက်စာရေး! Sonja စာတန်းထိုးသင်ခန်းစာများပေးထားပါတယ်။ ရာသီကပြင်သစ်စာတန်းထိုးနှင့်အတူဂျာမန်အတွက်သင်ခန်းစာများကိုပေးထားပါတယ်။ မိမိအဗီဒီယိုများကောင်းစွာတည်ဆောက်တကယ်ကြည့်ဖို့ထို့ကြောင့်လေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြပေးကြသည်!
ဗာဆိုင်းအကယ်ဒမီ 11 Allemand- :
ဂျာမန်ဘာသာကိုသင်ယူရန်အလွန်သင့်တော်သောဗာဆိုင်းအကယ်ဒမီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အခြားဂိမ်းများနှင့်သင်တန်းများအပြင်ကာနီဗာလ်၊ ဗာဆိုင်းနန်းတော်ရှိမိမိကိုယ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသောခရီးစဉ်၊ သို့မဟုတ်ပါတီများ ...
La Deutsche Welle မှပြုလုပ်သော audio-trainer သည် A1 နှင့် A2 အတွက်ရည်ရွယ်သည့်အသံဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်တိကျပြီးအသုံးဝင်သောအခြေခံဝေါဟာရသင်ခန်းစာ ၁၀၀ မျှသာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ဝဲယာကိုအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်အသံအဘယ်သို့သာယာသောပြောင်းလဲမှု, လက်ရှိ MP3 သို့မဟုတ် PDF ဖိုင်အားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေပါ!
Deutschland ထံမှမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ :
အဆိုပါ Goethe Institute မှအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများနှင့်အတူဂျာမန် podcasts တွေကိုများ၏ပလက်ဖောင်း။ သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့် 60 ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဂျာမနီသင့်ရဲ့အသိပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်! အရာအားလုံးဂျာမန်၌တည်ရှိ၏ကတည်းက။ သင်အမှန်တကယ်သင်တစ်ဦးကို PDF ဖိုင်အဖြစ်အပေါငျးတို့သစာမူ podcasts တွေကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, သင်နားထောင်သောအရာခပ်သိမ်းကိုနားလည်နိုင်အောင်။
Deutsch သားမွေး Euch :
Katja, ရယ်စရာတစ်ဦးပါမောက္ခအားဖြင့်အဆိုပြုထားနီးပါး 200 000 subscribers တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်ရုပ်သံလိုင်း။ မိမိအအင်္ဂလိပ်ဘာသာခိုင်ခံ့စေနေချိန်မှာဂျာမန်သင်ယူဖို့ A ကောင်းဆုံးကအခြားရွေးချယ်စရာ။
Annik ရုဗင်နှင့် 2007 ကတည်းကတည်ရှိအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး YouTube ပေါ်မှာဂျာမန်စာတန်းထိုးအတူကွဲပြားခြားနား podcast ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ကမ္ဘာတဝှမ်းဂျာမန်သင်ယူသူအဘို့နားထောင်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျ www.slowgerman.com အပေါ်ရရှိနိုင်ပရီမီယံအကြောင်းအရာ access ကို, ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တစ်ဦး bit နဲ့ပျော်စရာများအတွက်သင်ယူသူ၏လမ်းကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်? ပျော်စရာများနှင့်သင်ယူမှုပေါင်းစပ်ဖို့တစ်ဦးကအကြီးလမ်း, ဂိမ်းများ, သီချင်းများ, ဗီဒီယိုများ, ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, လူမှုရေးကွန်ရက်များ ... go: ငါတို့သည်သင်တို့သောသူထက် ပို. ဖျော်ဖြေသွားကြသည်အများအပြားအရင်းအမြစ်များကိုစာရင်းပြုစုထားပွီ!
ကောင်းမွန်သော IST ဂျာမန် :
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဘာသာစကားဂြာမနျစုံလင်ဖို့နီးပါး 200 ဂိမ်းများကိုတင်ဆက်အဖြစ်ကောင်းစွာထောက်ပံ့ဂျာမန်ပါမောက္ခအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတစ်ဦးကစာမျက်နှာ: စကားလုံးဂိမ်းများ, ပုံပြင်များ, အပြန်အလှန်ဂိမ်းများကိုတိကျတဲ့ themes များပေါ်တွင် ... သင်သည်အဘယ်အရာကိုပျော်စရာကောင်းတစ်ဦးအချိန်။
အခြေခံဝေါဟာရခိုင်မာအောင်နှင့်သင်ယူဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ site ကို။ အဆိုပါနည်းလမ်းကိုဂျာမန်အပါအဝင် 14 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်စကားများနှင့်အတူကစားရန်ရိုးရိုးပါပဲ။ သင်တစ်ဦးစကားလုံးဆောင်ခဲ့လျှင်အခါတိုင်းအသံထွက်ရှိသည်။
Goethe Institut မှဖန်တီးထားသော iPhone, iPad နှင့် Android အတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်အခမဲ့ application တစ်ခု။ Sky disk ၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာ A2 အတွက်ရည်ရွယ်ထားသောဂျာမန်ဘာသာတွင်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော“ လေးနက်သောဂိမ်း” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေမည့်ပဟေsolveိကိုဖြေရှင်းရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောစွန့်စားမှုများကြုံတွေ့ရခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဂျာမန်ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဗဟုသုတကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်ခွင့်ပြုသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Hangman24 : ရိုးရှင်းစွာအဂျာမန်ဗားရှင်းဆွဲထား! အဆိုပါလည်ဆွဲချတိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါ!
နောက်တဖန်ဒီမတူညီ site ကိုသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံအတွက်ဂျာမန်သင်ယူဖို့ခွင့်ပြု: မျိုးဆက်သစ်နှင့်အတူပျံသန်းစေမည်ဖြစ်သောလူကြိုက်များဂီတ, ဂျာမန် hip-hop ဗီဒီယိုများ Listen နှင့်စောင့်နေကြလော့။ တစ်ဦးကသင်ယူမှုရောနှောဂီတနှင့်ဂျာမန်ယဉ်ကျေးမှု!
iTunes နှင့် Google Play တွင်ရရှိနိုင်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း application ကို။ Speaky ဘာသာစကားဖလှယ်မှုများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လူမှုကွန်ယက်အဖြစ်, သင်ကသက်ဆိုင်ရာသင်နှင့်အတူဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူနှင့်သူမ၏သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့် chatting စဉ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကူအညီနှင့်လဲလှယ်အပေါ်အခြေခံပြီး, သငျသညျတူညီသောဦးတည်ချက်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးအပြောင်းအရွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
iTunes နှင့် Google Play တွင်ရရှိနိုင်မိုဘိုင်း app form မှာနောက်ထပ်ကို virtual အသိုင်းအဝိုင်း။ ဂျာမန်လမ်း Learn: ဖလှယ်မှုနှင့်ရပ်ရွာ၌ရှိသမျှသောအဖွဲ့ဝင်အကူအညီများအပြင်, သင်အပြန်အလှန်သင်တန်းများနှင့်ရပ်ရွာ၌ရှိသမျှသောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်လူထုများ၏လဲလှယ်အပေါ်အခြေခံပြီးပထမဦးဆုံးဆိုဒ်များတစ်ခုမှာ။ ဤသည်အလွန်ကြီးမားအသိုင်းအဝိုင်းစေသည်, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အိုမင်း interface ကိုအတူ။ ဒါဟာသင်ယင်း၏ဘာသာစကားနှင့်အပြန်အလှန်လေ့လာသင်ယူသောသင်နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအပေါင်းအဘော်နှင့်အတူကိုက်ညီမှခွင့်ပြု! ဒါဟာဂျာမန်တွေ့ဆုံရန်အချိန်ပဲ!
စိတ်မပူပါနဲ့အသံထွက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးပါတယ် ဂျာမန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွဲပြားမှုနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအသံထွက်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်ဟုဆိုသော်လည်းသင်ပြီးပြည့်စုံသောဂျာမန်ဝဲသည်အထိမပြည့်စုံသေးပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကတော့မင်းကိုအားလုံးနားလည်စေပြီးတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာပြောဆိုရန်။ သင်မှန်ကန်တဲ့အရင်းအမြစ်များကိုသာလိုအပ်တယ်။
ဂျာမန် Forvo :
နီးပါး 130 000 စကားလုံးများကို lists နှင့်သင်သည်သင်၏အသံထွက်တိုးတက်လာဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်။ ဤနည်းလမ်းကိုကိုယ်တိုင်သာအသုံးပြုသူများနှင့်ရပ်ရွာ Forvo နေဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်စကားလုံးများ၏အသံထွက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ရိုးရှင်းစွာအသင်ရှာဖွေရေးဘားနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်ချင်သောစကားများမကြာခဏနိုင်ငံများနှင့်ဒေသအများအပြားအသံထွက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ, သင်ကွဲပြားခြားနားသောမှတ်တမ်းများယူဆောင်လာလိမ့်မယ်ရိုက်ထည့်ပါ။
လုံးဝဂျာမန်တစ်ဦးအဘိဓါန်မှတစ်ဦးဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်။ ဒါဟာအသံထွက်နှင့်ဂျာမန်ဘာသာစကားမှာဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အလေးပေး, ဂျာမန်စကားများအဓိပ္ပာယ်ပေးထားပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ် themes များပေါ်တွင်နောက်ထပ်စာအုပ်တွေ, အဘိဓါနျယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သင်ဂျာမန်အသံထွက်၏အခြေခံကိုသိခွင့်ပြုတစ်ဦးကအလွန်လက်တွေ့ကျပြီးအသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်။ သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, သင် Search bar မှာဂျာမန်၌သင်တို့၏စကားလုံးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုသင်အသံထွက်နားထောင်ဖို့ညာဘက်အမျိုးမျိုးသောအဆိုပြုထားသောဆိုဒ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျကိုပငျရှေးခယျြမှုရှိသည်နှင့်ဒါကြောင့်သင်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကွဲပြားခြားနားသော themes များအရသိရသည်စကားများအများအပြားအသံထွက်ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ site ကို: လေဆိပ်, တိရိစ္ဆာန်ရုံ, ရုပ်ရှင်ရုံ, etc ဒါဟာသို့သော်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ကြသောသူတို့အဘို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လွယ်ကူသည်, အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တို့သည်လည်းဂျာမန်ဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ်ဂျာမန်) သင်ယူခြင်းအထူးအသံဖိုင်စာအုပ်စျေးဝယ်ရန် option ရှိသည်။
အသံလမ်းညွှန်မှတစ်ဆင့်နှစ်ချက်အသိဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဒါကြောင့်စကားများအသံထွက်ကိုနားထောင်ဖို့, စဝေါဟာရ (စကားလုံးများ, နံပါတ်များနှင့်အက္ခရာ) သင်ယူဖို့သင်ကနှစ်ဦးစလုံးဖွကတည်းကတစ်ဦးကအလွန်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်အခြေခံဂျာမန်။
သင်ရုံက၎င်း၏အသံထွက်ကိုနားထောငျဖို့စကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုကိုကျော်သင့်ရဲ့ cursor နေရာရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့သင်ယူမှုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကြည့်ရှုအွန်လိုင်းစာမေးပွဲများသွားကြဖို့ကထို option ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့သည်သင့်ကိုလျင်မြန်စွာသင်ယူဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း applications များ, ဝေါဟာရအာရုံစိုက်ကြောင်းအရင်ကဆိုရင်အဆင့်ဆင့်အဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းပိုပြီးအဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့် (A1 / A2) အတွက်သူများတွေ့ရှိခဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖြစ်ခြင်း။ အခုတော့သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ဂျာမန်ဆရာယူပါ။
iOS နဲ့ Android (A1 အဆင့်အထိ) အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း, crossword ပဟေဠိနှင့်ဂိမ်းများလုပ်နေသဖြင့်အခြေခံဝေါဟာရနှင့်ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံကငျြ့သုံးဖို့ Goethe Institute ကို, site ၏အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ။
မဖြစ်သေး spielen :
ဖတ်ရန် အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ရန်လမ်းညွှန်စပိန် Learn
အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် application အသစ်တစ်ခုကိုလည်း Goethe Institute မှတီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ စကားလုံးများ၏မြို့တော်” မှတစ်ဆင့်ဂျာမန်ကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် A1 / A2 အဆင့်အတွက်သင်၏ဝေါဟာရကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီးအခြားကစားသမားများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မှန်မှန်လေ့လာပါနှင့်5မိနစ်တစ်ရက်! ဒါကြောင့်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကရွေးချယ်အရေအတွက်ကို 1 application ကိုဖြစ်ဟန်ရှိသောကြောင့်တဖန် app ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်၌နေရာချနေပါသည်!
ပျော်စရာနှင့်၎င်း၏ဆုလာဘ်စနစ်ဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ်, သင် themes များကအောက်ပါသစ်ကိုဝေါဟာရစကားများဆောင်ကြဉ်းကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောသင်ခန်းစာများကိုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအောင်မြင်သောသင်ခန်းစာအရသိရသည် Listen, ရေးသား, ဖတ်ရှုသင်အဆင့်ကိုတက်ရွှေ့စေလိမ့်မည်ဟုမှတ်အာမခံပါသည်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဘာသာပြန်ချက်လေ့ကျင့်ခန်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများနှင့်ဂျာမန်စကားပြောဆိုရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးမသှ! ဘာသာစကားအသိုင်းအဝိုင်း interactive နှင့် based သဏ္ဍာန်, app ကိုသင်ဝေမျှနှင့် instant မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်စကားသံကိုမက်ဆေ့ခ်ျ၏ပုံစံအတွက်အခြားအသုံးပြုသူများနှငျ့ဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဘာသာစကားကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဘာသာပြန်ဆို tools တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။
အဲဒီလူကိုသင်နှင့်အတူပြင်သစ်သင်ယူပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာသင်ကတစ်စုံတစ်ဦးကိုဂျာမနီနှင့်အတူဂျာမန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကူညီပေးနေအကြောင်း2သန်းသုံးစွဲသူများဂျာမန်သင်ယူအပြင်ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ် enable လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ ငါတို့သည်လည်းအထူးကြပ်မတ်သင်ခန်းစာများများအတွက်ရရှိနိုင်ကျူရှင်ဆရာများသည်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ကြိုက်တယ်။
ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းပါသည်။ သူ၏နည်းလမ်း -“ ထပ်တလဲလဲထပ်တလဲလဲပြုလုပ်ခြင်း” ဆိုသည့်စကားလုံးသည်မေ့ပျောက်ရန်မသေချာသော်လည်းဝေါဟာရစကားလုံးများကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ နာမတော်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း "Memrise" သည်သင်နှင့်စကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျွမ်းကျင်သူများမှဖန်တီးထားသည့်သင်တန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော်အားဖြင့်၊ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီ၏အဆုံးမှာသင်ရရှိမည့်စာရင်းမှမှန်ကန်သောအဖြေကိုရွေးချယ်သည်။ သင့်အတွက်သင်ယူရန်အခက်ခဲဆုံးသောစကားလုံးများကိုသင်လိုက်နာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏စာရင်းအင်းများကိုခြေရာခံ။ ၎င်း၏အော့ဖ်လိုင်းစနစ်ကြောင့်အချိန်မရွေးလေ့လာပါ။ သင်၏အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းမရှိသောစမတ် app တစ်ခု။
ယူနိုက်တက်စတိတ်မှအွန်လိုင်းပညာရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်သန်းနှင့်ချီသောကျောင်းသားများနှင့်ဆရာများကိုလစဉ်အသုံးပြုသည်။ တူညီသော 'အကွာအဝေးအထပ်ထပ်' နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ ဤ app သည်လေ့လာရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော၊ သင်သည်ရှိပြီးသားစာရင်း ၂၁၄,၀၈၂,၀၀၀ တွင်ရှာဖွေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များထည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုပုံသဏ္ာန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားပါ၊ သင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးကဒ်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လေ့လာခြင်းဖြင့်သင်၏အဆင့်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူသငျသညျအထူးသဖြင့်နှုတ်ဘာသာစကားကိုကျင့်သုံးပါ။ အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအသံဖိုင်ပုံစံ၌ရှိကြ၏: သင်သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံဖို့လုပ်အသံသွင်းမှတဆင့်စကားများသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးမှုများကိုပြန်လုပ်ပါ။ သငျသညျကိုလည်း App ကိုတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်သင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်သင်ခန်းစာများကို download လုပ်ပါရန် option ရှိသည်။ အပြန်အလှန်အသံသင်တန်းများ, ဘာသာစကားသင်တန်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု, သင်စာကြောင်းများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုစာရွက်စာတမ်းများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သင့်အသံထွက်တိုးတက်လာဖို့ခွင့်ပြုမယ့်စကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုမှု၏ 60 နာရီထက်ပိုကတည်းကတစ်ဦးကအလွန်ကောင်းသောအခြေစိုက်စခန်း။
သင်တို့ရှိသမျှသည်လေ့ကျင့်ခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ပရီမီယံ access ကိုရှိနိုင်ပါသည်။
စကားများနှင့်အတူကစားသောပျော်စရာ app တစ်ခု! အမှန်စင်စစ် Scrabble, crossword ပဟေဠိ, ဆွဲထားသို့မဟုတ်အခြားဂိမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအဘို့ကြီးစွာသော app ကို။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်ထိရောက်တဲ့ technique ကို: တစ်စကားလုံးတစ်ကဒ်သကဲ့သို့သငျပေးနှငျ့သငျမှန်ကန်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှေးခယျြရမညျဖွစျသညျ။
ဒါဟာခိုင်မာတဲ့နှင့်ကြာရှည်ခံဝေါဟာရတည်ဆောက်ခြင်းစဉ်ကလည်းခဲယဉ်းသောတရားစကားတစ်အဘိဓါန်ပါဝင်သောကြောင့်, သင်သည်သင်၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေကူညီပေးပါမည်။ သင်ယူဖို့ A ကောင်းဆုံးလမ်း!
သူတို့ရဲ့အစောဆုံးအသက်အရွယ်ကနေဂျာမန်သင်၏သားသမီးမျှဝေပါ။ ကျနော်တို့အမြစ်ငယ်ရွယ် built ကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏, ဒါကြောင့်ဂျာမန်သင်ယူဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာထားရန်ဤကွဲပြားခြားနားသောဝဘ်နှင့်မိုဘိုင်း application များဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အားသာချက်ယူပါ။
ပျော်စရာများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု, ဤ tools များသင်ယူဖို့ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်နှင့်ကျောင်း complementary ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏သားသမီးနှင့်အတူဂျာမန်သင်ယူဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ဦးကဂျာမန် site ကို။ သူတို့ကိုဂျာမန်ကိုချစ်စေမည်ကြောင်းအတော်များများကဂိမ်း, သီချင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ!
အရင်းအမြစ်အဖြစ်တစ်ဦးကကြွယ်ဝတဲ့ဘလော့ဂ်သည်လက်ရှိတွင်ဂျာမန်သင်ယူဘို့ 1000 ကောလိပ်လေ့ကျင့်ခန်းထက်ပိုရှိပါတယ်။ type စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု: နေ့စဉ်ဘဝကနေမတူညီတဲ့ themes များနှင့်အတူဝေါဟာရ, သဒ္ဒါ, အသံထွက်သို့မဟုတ်လူ့ယဉ်ကျေးမှု။ သငျသညျ (မူလတန်းကနေ3ème LV2 မှ) သင့်လူတန်းစားများ၏အဆင့်ကိုပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၃ နှစ်မှ ၁၁ နှစ်ကြားကလေးများအတွက်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနည်းစနစ်များအတွက်အထူးပြုပလက်ဖောင်း။ ဂျာမန်စာသင်ကြားရန်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များစွာရှိသောအလွန်ပြည့်စုံသော site တစ်ခု။ ကမ်းလှမ်းထားသည့်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများအများစုသည် DVD များ၊ စာအုပ်များ၊ စီဒီများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊
အက်စ် Waived အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးတစ်ဦးက site ကိုအဓိကအားကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်။
ဒါဟာမျိုးစုံတည်းဖြတ်မူများကိုသဒ္ဒါအပေါ်အခြေခံပြီးဂျာမန်အတွက်အကူအညီများပုံစံများ, ဝေါဟာရ, verb ကြိယာ, IBC အပါအဝင်အားလုံးစာမေးပွဲပါဝင်သည်။
အနည်းငယ်သောသမိုင်း, အသံထွက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှု site ပေါ်တွင်လည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
သားသမီးတို့အဘို့အွန်လိုင်းမှမဂ္ဂဇင်း။ ကဂြာမနျတွင်လုံးဝသောကွောငျ့, ကသင်၏သားသမီးပြီးသားဝေါဟာရတစ်ခုကောင်းသောအဆင့်အထိရှိသည် သာ. ကောင်း၏။ ဒီမဂ္ဂဇင်းကသူတို့ကိုပထမပိုပြီးဝေါဟာရသိမ်းသွင်းနှင့်လည်းပြိုးထောငျဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မည်!
အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ရန်လမ်းညွှန်အဆိုပါဂျာမန် Learn မေလ 21st, 2018Tranquillus
အင်္ဂလိပ် Learn ရန်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်၏ထိပ်တန်း